ओली-प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाभित्र लफडा, एउटा समूह कांग्रेससँग मिल्यो, अरु को-को जाँदैछन् ? — Imandarmedia.com
ओली-प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाभित्र लफडा, एउटा समूह कांग्रेससँग मिल्यो, अरु को-को जाँदैछन् ?
दुई ठूला कम्युनष्टि पार्टी एक भएर इतिहासकै ठूलो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको छ ।
इतिहासकै शक्तिशाली पार्टी बनेसँगै नेकपालाई कमजोर पार्ने विभिन्न षडयन्त्रहरू भैरहेको विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैँले पटक पटक सर्वजनिक रुपमा भाषण नै गर्दै हिडेका छन । नेपाल समाचार पत्र दैनिकले खबर छापेको छ ।
यद्यपी पार्टीलाई कमजोर बनाउन केन्द्रीयस्तरकै नेताहरूको सक्रियतालाई नेकपाले नजरअन्दाज गरेको देखिएको छ ।
उनी जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि कांग्रेससहितको टिम जिताउने अभियानमा लागेका छन् । आसाइ ट्रेक्सका मालिक समेत रहेका थापा फेक रेस्क्युको छानविनको दायरामा रहेका व्यवसायी हुन् ।